Naadiga Habeenkii Ugu Gaarka Badnaa Adduunka LOUIS XIII si ay u siiso Ultra-Rare Red Decanter N ° XIII
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Naadiga Habeenkii Ugu Gaarka Badnaa Adduunka LOUIS XIII si ay u siiso Ultra-Rare Red Decanter N ° XIII
Waxaa jira oo keliya 200 N ° XIII jajabka gaduudan oo laga heli karo adduunka oo dhan, taas oo macnaheedu yahay in qaybintu ay ku kooban tahay hal decanter halkii naadi habeenkii.
LOUIS XIII cognac waa natiijada guusha nolosha ee jiilalka Cellar Masters, oo isku daraya eaux-de-vie ugu wanaagsan iyadoo la adeegsanayo canab si gaar ah loogu beeray Grande Champagne. Waxaa lama huraan u ah LOUIS XIII inay waayo -aragnimo u yeelato caado ahaan, hoos u dhac, si ay u muujiso muujinta dhadhanka daba dheeraaday oo sii kordhaya, hal daqiiqad oo heer sare ah. Macaamiisha doonaya inay tijaabiyaan nasiibkooda iyagoo dalbanaya mid ka mid ah Khibradaha N ° XIII waxay geli karaan LOUIS XIII Society* ama waxay si toos ah wax uga iibsan karaan goobaha cawayska ee la xushay. Safiirka Calaamiga ee LOUIS XIII ayaa mid walba la soo xiriiri doona si uu u abaabulo tacaburkan gaarka ah. Waayo -aragnimadu waa mid gaar ah oo waxaa jirta fursad weyn oo ah in lagu aqbalo hawl -bannaan.
Deanter -kii ugu horreeyay ee N ° XIII ee yimaada Mareykanka waxaa daaha laga rogi doonaa Oktoobar 15 -keeda OMNIA ee Las Vegas. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan helitaanka badeecada, la xiriir: [emailka waa la ilaaliyay]
WAQTI KU BIIR WAXYAABO GAAR AH
Waqtigu waa alaabta ceeriin ee LOUIS XIII, iyo N ° XIII wuxuu noo oggolaanayaa inaan sahamino muujinta waqtiga oo dhan. Nolosha habeenka waxaa lagu qeexaa dareen xorriyad, raaxo iyo damaashaad, kuwaas oo dhammaantood ay qabsadeen oo sii xoojiyeen dhaqankii dhadhaminta ee N ° XIII: casaan khaas ah oo si gaar ah loo tiriyey, oo laga soo saaray shaashadda LED -ka. Lix muraayadood oo casaan ah oo casaan ah oo ku yaal saxaarad iftiin leh ayaa la socota, oo ka dhex taagan dadkii badnaa. Gaduudan waa midabka qeexaya waayo -aragnimada, qabashada xiisaha, korontada iyo xoogga nolosha habeenka. LOUIS XIII waxaa la siiyaa iyadoo la isticmaalayo dhuumaha qaaska ah ee loo yaqaan cognac, oo loo yaqaan Spear, si loo sii dheereeyo caadada adeegga ka -tagidda. Udgoonnada iyo qoraallada cognac -ka cajiibka ah ayaa markaa lagu kaydin karaa dherer. LOUIS XIII waxay habeysaa laxanka u gaarka ah habeenkii.
DECANTER CRAFTED HAND
LOUIS XIII waxay iskaashi la sameysay Saint –Louis, oo ah soo saaraha dhalada ugu da'da weyn Yurub, si ay u abuurto gacmo -gacmeed N ° XIII gacmeed guduudan oo casaan ah iyo muraayado gaduudan oo cas. Midabka cas ee firfircoon ee muraayadda waxaa lagu gaari karaa oo keliya iyada oo la adeegsanayo hab qarsoodi ah oo u baahan in lagu daro dahab. Jacaylka la wadaago ee Saint-Louis ee dhaqanka, savoir-faire iyo hal-abuurnimadu waxay ku soo baxdaa jajabka dhif ah: waa la afuufay, la jarjaray, la qurxiyey oo gacanta lagu xardhay, oo shaqsi ahaan loo tiriyey, waxaa lagu dhammeeyay saxiixa LOUIS XIII ee dentelle spikes iyo qoorta palladium . Iyadoo la raacayo caadadii dhadhaminta ee N ° XIII, macmiilku waxay ka tagi karaan goobta lagu caweeyo iyagoo leh N ° XIII (haddii xeerarka naadiga iyo xeerarka sharciga maxalliga ahi oggolaadaan) oo ah xusuus qaali ah oo ah xusuusta habeenada ugu xusuusta badan. Joojiyaha karti u leh NFC wuxuu milkiilaha siinayaa fursad gaar ah oo uu u leeyahay Bulshada LOUIS XIII iyo dhammaan faa'iidooyinka xubinnimada.
Qiimaha iibinta ee LOUIS XIIII N ° XIII ayaa la heli karaa marka la codsado.
*Ururka LOUIS XIII waa naadi xubnaha gaarka loo leeyahay oo leh milkiilayaasha derajiyaha Cognac LOUIS XIII.